Shiinaha Dahaarka Rubber, UV koronto, daabacaadda shinnida, wareejinta biyaha burushka timaha oo leh warshad iyo soosaarayaal Intelliflex barar | Yongsheng
Dahaarka caag, UV koronto, daabacaadda shinnida, wareejinta biyaha burushka timaha oo leh muraayad Intelliflex ah
Waxyaabaha: ABS ， TPR ， nylon,
Midabka: Madow, Casaan, Buluug, Jaale, Cagaar,… Customization.
Xirmo Caadi ah: Burush kasta oo wata boorsada nayloon ee furan. 12PCS / sanduuqa hoose. 120PCS / kartoonka.
Burushka timaha Detangler waxay isticmaalaan bristles Intelliflex gaar ah oo foorarsada oo rogrogmada si guntimaha looga saaro si dhib la'aan ah. Burushka timaha Detangler wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa timo toosan, timo jilicsan, timo khafiif ah, timo qaro weyn, timo dhaawacan, timo jare, iyo xitaa kordhin. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba timo qoyan ama qalalan oo leh jajab yar. Dareeraha intelliflex ayaa si tartiib ah u kala sooci kara xitaa kuwa ugu adag ee tangles oo aan jeexin, jarjarayn ama jiidan. Waxay timaha uga tagtaa iyagoo dhalaalaya oo jilicsan oo jilicsan. Burushka timaha Detangler waxaa loogu talagalay si qurux badan si loo yareeyo xanuunka loona ilaaliyo timaha dhinacyada kala jaban. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku cadaydo xoog yar sidaa darteed waxaad ku dhaafi kartaa waxyeelo yar oo timahaaga ah. Burushka timaha qoyan uma eka sida burushyada caadiga ah waxay ka shaqeeyaan timaha, cadayashada guntimaha Burushku wuxuu si tartiib ah u furaa iskudhafka ugu adag ee khibrada xanuun la’aanta ah isagoo leh awood yar sidaa darteed waxaad ufeyn kartaa waxyeelada yar ee timahaaga. Burushka jilicsan ee jilicsan ayaa aad ugu fiican dadka waaweyn iyo carruurta leh maqaarka jilicsan ama xasaasiga ah. Xuruufta u gaarka ah waxay si tartiib ah u kala sooci kartaa xitaa kuwa ugu adag ee isdabajooga iyadoon la jeexin, la jarjaro ama la jiido. In kasta oo burushyada caadiga ah ay ka shaqeeyaan timaha, asal ahaan waa la jeexjeexaa oo la soo bixiyaa timaha guntin halkii laga furi lahaa. Burburku waxaa lagu soo diri karaa qoraal 4-5N tijaabooyin silig ah waqtigan xaadirka ah.
Waxaan lahaan jirnay qaabab kaladuwan oo ay ku sameyn karaan waxyaalaha qarxa. Waxayna la noqon kartaa dhammeystir saameyn leh oo kala duwan. Dahaarka caag, wareejinta biyaha, kala iibsiga kulul, UV korontada, rinjiyeynta dhalaalaya dhammaantood waa la heli karaa.
Hore: Dahaarka caagagga, wareejinta biyaha, UV buraashka timaha timaha korontada oo leh barkinta dabacsan
Xiga: UV koronto, tarjuma biyaha, shuminta burushka timaha ee daabacan oo leh qalab loogu talagalay
Burush Bristle Timaha caday
Burushka Timaha Boar
Qurxin Burushka Timaha
Qalabka caday timaha
Burush Timo Dahab Rose
Burushka Timaha ee Rolling Wooden